Brewers Yenza ukubola, igwele lenza ibhiya-Iindaba-NingBo COFF Machinery Co., ltd
Brewers Yenza i-Wort, igwele lenza ibhiya
Ixesha: 2020-07-10 I ngxelo: 41
Ukurhola ngomrhumo kuya kuba yinto yobugcisa kunye nokungaxoleli, ngelixa namhlanje abenzi botywala besenza lo mngeni kwaye besebenzisa iitanki zokubambisa ezithe tye, ezixhaphake ngakumbi kwimizi yokuthengisa iimveliso ezinkulu zehlabathi, ukugcina igwele labo lonwabile.
Iitanki eziqaqambileyo / itanki yebrite ethe tyaba ihlala ibekwa kwigumbi elinobude obaneleyo Ukugcina indawo ethile itanki ingafakwa kumanqanaba aliqela ukukhulisa inani leetanki. Ngokwesiqhelo uyayibona eYurophu ngenxa yesakhiwo esidala kunye nemiba yokuphakama.
Incasa engafihlisiyo ye-lager ye-strains ithetha ukuba kuncinci kwiziphene zokufihla ngasemva, kunye nokusilela kwinkqubo yomenzi okanye kwizithako ezima phandle enkalakahleni.
Njengoko izitayile zelager zikhula ekuthandeni, abanye abapheki bajonge kwiindlela ezivavanyiweyo ukunceda ukukhawulezisa imveliso kunye nokugcina imvubelo yabo ebambekayo. Endaweni yemozulu ebandayo kwiinqanawa ze-cylindroconical ferment okanye kwi "unitanks" ezifumaneka kuyo yonke indawo, abenzi botshintsho bajika isigaba esibambekayo ecaleni kwaso. Itanki yokubambeka ethe tyaba ifumana ikhaya kwindawo encinci yokuzimela.
Clike Apha ukuze uqhagamshelane nathi.
Previous: Inkqubo yokuvelisa i-odolo eya eJapan
Okulandelayo: Undwendwe lwaseJapan luya kufumana iimpahla zeetanki eziqaqambileyo zebhiya kunye neetanki zokuvumba